तल्लो जातका राजेश नेपालीले क्षेत्रीको छोरी भगाएर गरे धुमधामसंग विवाह यस्तो छ प्रेम काहानी – Khabar Patrika Np
तल्लो जातका राजेश नेपालीले क्षेत्रीको छोरी भगाएर गरे धुमधामसंग विवाह यस्तो छ प्रेम काहानी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण १४, २०७७ समय: १७:५३:०७
नेपाली समाजको भित्रि वा बाहिरी मनोदशा हेर्ने हो भने अहिले पनि अन्तर्जातीय विवाहलाई सजिलै स्वीकारेको पाइँदैन । तर, पनि अन्तर्जातीय विवाह हुने गरेको पाइन्छ ।
कथितरुपमा तल्लो जात र उपल्लो जात भनि गरिएको वर्गीकरणले विवाहजस्तो कुरामा समेत केटाकेटीले सहजै निर्णय गर्न सक्दैनन् । तर, उदारवादी हुँदै गइरहेको पछिल्लो समयक्रमलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने यो जातजाती भन्ने प्रसंग र विभेदका कुरा पनि अब चर्चा गरिररहनु पर्ने विषय रहेन भन्ने कतिपयको मत छ ।
अन्तर्जातीय विवाह गरेका राजेश नेपाली र अन्जना कुँवरसँग हामीले उनीहरुले कसरी यो कदम चाले ? कथित रुपमा तल्लो उपल्लो जात भन्ने समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कसरी सम्भव भयो ?
उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो ? उनीहरुले कसरी विवाह गरे ? लगायतका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानी रोचक छ, पूरा हेर्नुहोला । यही सामाजिक उल्झनका बीच पनि आँटेर अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडी भेटेपछि हामीले उनीहरुको अनुभव सुनेका छौं । अन्तर्जातीय विवाह गरेका राजेश नेपाली र अन्जना कुँवरसँग हामीले उनीहरुले कसरी यो कदम चाले ?
कथित रुपमा तल्लो उपल्लो जात भन्ने समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कसरी सम्भव भयो ? उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध कसरी स्थापित भयो ? उनीहरुले कसरी विवाह गरे ? लगायतका बारेमा कुराकानी गरेका छौं । कुराकानी रोचक छ, पूरा हेर्नुहोला ।